Namoonni miiliyoona 23 biqiltuu dhaabuurratti hirmaataniiru - BBC News Afaan Oromoo
Namoonni miiliyoona 23 biqiltuu dhaabuurratti hirmaataniiru
Duula biqiltuu dhaabuu guyyoota lamaan dura gaggeeffamaa ture irratti lammileen Itoophiyaa miliyoona 23 ol ta'an hirmaachuun isaanii himameera.
Qindeessaan Sagantaa Misooma Bosonaa Biyyaalessaa Dr. Tafarraa Mangistuu BBCtti akka himanitti, biqiltuuwwan dhaabaman kan biyya keessaafi sanyii biyya alaatii of keessaa qaban keessatti argamu.
Aanga'aan kun akka jedhanitti ibsa akaakuuwwan biqiltoota kanaa ballinaan gara fuula duraatti ibsina jedhan.
Biqiltuuwwan Wixata darbe dhaabaman marti isaanii kan biyya keessatti qophaa'an ta'uu kan eeran Dr. Tafarraan, Waxabajji 26 asitti biqiltuuwwan biliyoona 3.5 guutummaa biyyattii keessatti dhaabamuu dabalanii ibsaniiru.
Itoophiyaan biqitluu dhaabuun ‘riikardii cabsite’
Biqiltuuwwan dhaabaman akkamiin lakkaawaman?
Duulli kakaasuu Ministira Muummee Dr. Abiy Ahimadiin jalqabame kun Wixata darbe guyyaa tokkotti biqiltuuwwan miliyoona 200 dhaabuudhaaf karoorfamee kan ture yommuu ta'u, guyyaa sanarra guutummaa biyyattiitti biqiltuuwwan dhaabaman miliyoona 350 ol ta'uu isaa gara galgalaa mootummaan ibsuun isaa ni yaadatama.
Haala kanaan duula Wixata darbe kanaan namni tokko tilmaamaan biqiltuu 15.2 kan dhaabe yommuu ta'u, duula ganamaa hanga galgalaaatti tureen ammoo daqiiqaa tokko keessatti biqiltuuwwan 500,000 dhaabamaa oolan jechuudha.
Bakkawwan tokko tokotti hir'inni biqiltuuwwan dhaabamanii mudatee akka ture dubbatamee kan ture yoo ta'ellee, Dr. Tafarraan garuu "biqiltuuwwan qophaa'an baayyinni isaanii biliyoona 4.7 waan tureef hir'inni biqiltuu hin mudanne" jechuudhaan mootummoonni naannolee duula ture sanaaf qophii ol aanaa taasisanii waan turaniif hanga eegameen ol milkaa'inni guddaan argamuus ibsaniiru.
Biqiloota miliyoona 200 guyyaa tokkotti
Guyyaa tokko qofaa keessatti biqiltoota hedduu dhaabuudhaan rikoordii Hindiin qabamee ture akka cabsuu danda'ame himamaa akka jirus dubbataniiru Dr. Tafarraan.
Galmee addunyaa Genius Book of the World, jedhamu irratti galmaa'uu isaa gaafatamanii, dhimma kana waajira ministeera muummeetu hordofaa jira jedhan Dr. Tafarraan.
Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa ittisuuf biqiltuu dhaabuun ‘riikardii cabsite’